Mepụta ihe nbipute 3D na onye mere kọfị ochie na bọọdụ Arduino | Akụrụngwa n'efu
Joaquin Garcia Cobo | | Arduino, Nkọwa 3D
Enwere ọtụtụ ọrụ metụtara mbipụta 3D, ọtụtụ ndị ọzọ na-ejigharị ngwaọrụ ochie, mana enweghị ọtụtụ dịka ọrụ ngo Tropical Labs ugbu a: otu agadi kọfị ga-enwe ike 3D ebipụta ihe.
Ihe oru ngo a bu ihe uto n’ihi na o n’eji ike nke igwe igwe ochie ahu aghaghi irite uru dika ihe owuwu ya na ngwa elekrọnik, ka enwee ike ibiputa ihe 3D dika o bu onye nbipute ihe oru RepRap.
The Tropical Labs oru ngo na-akpali, -adakarị nnọọ ebe ọ bụ na ọ na-agwakọta imegharị ihe iji na 3D ebi akwụkwọ. Mana ọ bụrụ na ị na-achọ onye obibi akwụkwọ 3D dị ọnụ ala, chefuo ọrụ a. Onye na-eme kọfị nke a na-atụle na-enyefe akụkụ ya na akụkụ ya dị iche iche.
Enwere ike gbanwee onye na-eme kọfị ochie ka ọ bụrụ onye na-ebi akwụkwọ 3D ekele maka ọrụ mmejọ a
Ma ọ bụrụ na anyị ga-eji ihe ndị dị oke ọnụ nke ihe nbipute 3D, ya bụ elektrọnik na onye na-apụ apụ. N'okwu a, ọrụ ahụ na-eji bọọdụ Arduino MEGA tinyere Ramps 1.4 electron. Yabụ ọ gwụla ma anyị nwere onye mere ochie kọfị, ọ gaghị abụ ọrụ ga-enyere anyị aka.
Ka o sina dị, oru ngo bu kpam kpam viable na anyị nwere ike mụta nwa ya dị ka Tropical Labs. Anyị nwere ike mụta nwa oru ngo a ekele ya tọhapụ na Weebụ Hackaday, na weebụsaịtị nke anyị ga-achọta ozi niile iji weghachite ya na ọbụna gbanwee ya ka ọ masịrị anyị.
Ihe kachasị ama banyere ihe a niile bụ na ọrụ a, a na-etinye igwe kọfị dị ka ezigbo ndị enyi nke onye mebere ya na 3D obibi akwụkwọ. Ebe ọ bụ na igwe kọfị nke oge a na-arụ ọrụ site na capsules, nwere ike ijere anyị ozi dị ka ihe oriri iji mepụta ihe ndị e biri ebi na akụrụngwa kọfị ochie, ekele maka ọrụ a, nwere ike ije ozi dị ka ndị na-ebi akwụkwọ 3D, ọbụlagodi ịmalite ụwa nke mbipụta 3D ma ọ bụ mepụta ihe ndị bụ isi nke ahụ dị anyị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Ha na-ekepụta ihe eji ebi 3D na onye na-eme kọfị ochie na bọọdụ Arduino